Japan Dreams Mandalay သည် မန္တလေးတွင် ကျောင်းသားပေါင်း ၃၀၀ ကျော် က ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားနေသော ကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်စာအုပ်များကို စာတိုက်မှပို့ပေးပါသည်။
Japan Dreams Mandalay 日本語学校はマンダレー市で誕生した日本語学校で、現在本サイトや学習アプリを通してオンライン日本語授業を行っております。2022年1月の時点で日本語学習者203名が在籍しております。
သင့်လက်ကိုင်ဖုံးတွင် ဂျပန်စာသင်ကားရေးအပလီကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုရုံဖြင့် Japan Dreams Mandalay ရဲ့ အွန်လိုင်းဂျပန်စာသင်တန်းများကို စနစ်တကျသင်ယူလေ့လာနိုင်ပါပြီ။ စာသင်သားတိုင်း ဤစာမျက်နှာ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ LogIn ကို နှိပ်ပြီး၊ ထွက်လာသည့်စာမျက်နှာတွင် Facebook ကိုနှိပ်ပြီး အသင်းဝင်ပါ။
ဂျပန်စာသင်ပြီးသည်နှင့် ကျောင်းအုပ်ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်သော JWORKS ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီမှတဆင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အလုပ်မိတ်ဆက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ JWORKS လိုင်စင်ရပြည်ပအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ ဖုံး - 09-440-450-186
၁။ Android ဟန်းဖုံး၊ iPhone ဟန်းဖုံး တွင် အပလီကေးရှင်း App ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ကာ အလွယ်တကူ ဖွင့်ကြည့်ကာ သင်ယူနိုင်ပါပြီ။
၂။ တက်မည့်အတန်းကို ရွေးချယ်ပါ။ ကျသင့်ငွေလွှဲပြီးလျှင် စာအုပ်များကို စာတိုက်မှ ပို့ပေးပါမည်။
၃။ ဖုံးဆက်ကာ အပလီဒေါင်းလုတ်လုပ်နည်းမှစကာ သင်ယူပုံနည်းစနစ်များအား အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။
・ဆရာမမှ Liveဗွီဒီယိုမီတင်ဖြင့် ပြန်လည်ရှင်းပြခြင်း
・စာမေးပွဲများအား ဖုံးဖြင့် ခလုတ်နှိပ်ကာ ဖြေဆိုခြင်း
၅။ ကျောင်းခေါ်ချိန်မှန်အောင်တက်ပြီး စာမေးပွဲတွင် အောင်မှတ်ရလျှင် အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါမည်။
(၁) သင်ယူလိုသောအတန်းအတွက် မည်မျှကျသင့်သည်ကို အောက်တွင်ရှိသော အတန်းများကို ကြည့်ပါ။
(၂) ယင်းအတန်းအတွက် ကျသင့်ငွေ စုစုပေါင်းကို KBZpay 100858214 (Japan Dreams) သို့ သင်တန်းကြေးလွှဲပေးပါ။ အမြို့အမြို့အနယ်နယ်ရှိ KBZ ဘဏ်ခွဲများ၊ KBZpay ဖြင့်ငွေလွှဲနိုင်သောဆိုင်များတွင် ငွေလွှဲနိုင်ပါပြီ။
(၃) ငွေလွှဲကို Japan Dreams မှ လက်ခံရရှိလာလျှင် သင့်ဖုံးနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီး သင်တန်းတက်ရန် အသေးစိတ်ကို ရှင်းပြပေးပါမည်။
(၄) သင့်ထံသို့ဖတ်စာအုပ်များကို စာတိုက်မှပို့ပါမည်။ ပို့ခကို သင်ပေးရပါမည်။
မရှင်းသည်များရှိပါက 09-450-666-011 သို့ ဖုံးဆက်ပါ။ ဆက်မရပါက ပြန်ဆက်ပေးနိုင်ရန် call ဟု မက်စေ့ပို့လျှင် သေချာပြန်ဆက်ကာ ရှင်းပြပေးပါမည်။
N3 Grammar 2
N5 Kanji 2
N5 Grammar 2
N5 Kanji 1
N5 Grammar 1
N5 Grammar ▲
Teacher: Wei Phyo
N5 Kanji ▲
N4 Kanji 1
N4 Grammar 1
N4 Grammar ▲
N4 Kanji ▲
N3 Kanji 1
N3 Grammar 1
N3 Grammar ▲
N3 Kanji ▲
Kaigo Tokutei 1 ▲
Tokutei Ginou စိုက်ပျိုးရေး 農業
Tokutei Ginou ဘိုးဘွားရိပ်သာ 介護
Tokutei Ginou စားသောက်ကုန်ထုတ် 飲食料品製造業
Japanese Speaking for Everyone
JFT Basic 1 - 2
JFT Basic2- 1
JFT Basic 1 - 1
Teacher: Ther Yii
Japan Dreams Japanese Language School, Mandalay, Myanmar
Building A9, 30th Street (Between 65 & 66 Street),
Minkon Compound Residence, Chanayethazan Township, Mandalay, Myanmar.
JWORKS Oversea Employment Agency, Yangon, Myanmar
Room 201, Building 24C, Laydaung Kan Road,
Thumingalar Housing, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.
Copyright ® Japan Dreams Mandalay